Statmux dia hita any amin'ny AWS Elemental MediaLive | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
USSI Global hanavaozana sy hitazonana ny tambajotram-pifandraisana satelita Broadcast Sinclair
CP Communication Mahazo SportsCam
GatesAir dia mampiroborobo an'i Mark Goins ho an'ny filoha lefitry ny varotra Amerika Avaratra
Cablecast Community Media Platform sy ny Screenweave LIVE mitazona ny mpianatra ao amin'ny distrika North Penn School mandritra ny Pandemie
Mpiara-miasa StreamS sy StreamGuys ho an'ny streaming mivantana Audio manaraka
Hitachi Cameras hampiakatra ny streaming sy ny kalitaon'ny IMAG ho an'ny fiangonana Immanuel Baptist an'ny Little Rock
Mankalaza ny faha-15 taonan'ny fankalazana ny haitao sy fanavaozana ny HPA
Fetiben'ny literatiora Cheltenham Powered by Blackmagic Design
Matrox Extio 3: IP KVM voalohany manerantany hanitatra ireo rafitra valo miampita ny sehatr'asa Dual-4K lavitra
DP Derango Weathers -35 ° amin'ny Fatman miaraka amin'ny fanampiana avy any Teradek & SmallHD
Zixi dia nanambara ny fiaraha-miasa amin'ny Google Cloud
Atomos dia handefa ny mpanara-maso HDR NEON 17 "sy NEON 24" amin'ny Novambra 2020
Telstra dia mandefa ny sehatra Telstra Octagon hanafainganana ny fifanakalozana manerana ny fifanakalozana eraky ny valo
Solène Zavagno notendrena ho mpitantana ankapobeny ny Gravity Media any Frantsa
Ny tobin'ny fahitalavitra Hearst dia mampiasa tamba-jotra TVU ho an'ny fampielezana lavitra isan'andro
Home » Featured » Statmux dia azo alaina ao amin'ny AWS Elemental MediaLive
Statmux dia azo alaina ao amin'ny AWS Elemental MediaLive
amin'ny maha- Amazon Web Services orinasa, AWS Elemental MediaLive manambatra ny fahaizan'ny horonan-tsarimihetsika lalina amin'ny herin'ny hazavana sy ny haben'ny rahona hanomezana ireo mpampiasa ny famolavolana horonantsary miorina / mahomby amin'ny famolavolana rindrambaiko vita amin'ny finday. AWS Elemental MediaLive mamela ny mpanjifany ho tonga tsara ny fahatongavan'ny rahona rehefa ilaina amin'ny fangatahana sy amin'ny karama rehefa mandeha ny serivisy ianao.
Media Elemental AWS Ankehitriny Manolotra Statmux
Statistik Multiplexing (Statmux) dia efa misy ankehitriny AWS Elemental MediaLive, ary ity teknôlôjia manokana ity dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny fahitalavitra mitatitra izay manome anjara amin'ny fotoana tena izy eo amin'ireo fantsona horonantsary mivantana. Ny zavatra lehibe Statmux dia ny fanamafisana ny fahombiazan'ny tambajotra amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny kalitao sary ho an'ny andian-tsolika ao anaty bandwidth tanteraka. mampiasa AWS Elemental MediaLive miaraka amin'ny Statmux dia ahafahan'ny mpanjifany manaparitaka ny fametrahana horonantsary tsipika sy fanatanjahan-tena ao amin'ny AWS Cloud ho an'ny fampielezana, tariby, na fizarana terestrialy.
Ireo orinasam-baovao, toy ny mpampahalala nasionaly, dia namorona votoaty mivantana ary mizara izany atiny amin'ny mpiara-miasa mizara azy ireo izany. Amin'ny fomba nentim-paharazana, izany dia tontosa amin'ny fanomanana fantsom-pamokarana amin'ny alàlan'ny encode mpanamboatra fitaovana naorina. Ireo rafitra ireo dia mety haharitra amam-bolana mba ahazoana sy hanitsiana. Mila injeniera be dia be izy ireo mba hiasa azo antoka, ary tsy azo averina indray izy ireo rehefa napetraka. Satria ny AWS Elemental MediaLive izao dia manana Statmux, ny mpamaky sy ny mpamatsy votoaty dia afaka manangana sy mitantana fantsom-peo horonan-tsarimihetsika amin'ny serivisy AWS tantanina tanteraka, izay manome azy malalaka be fotsiny, na dia mampihena ny vidin'ny fitaovam-pamokarana / fitantanana aza, ary manome kalitao tsara ny sary miaraka amina vita. -tsy azo itokisana.
Media momba ny AWS Elemental
Ny tombontsoa lehibe an'ny AWS Elemental MediaLive miaraka amin'ny Statmux dia misy fiasa toy ny.
Famoronana efa vita
Kalitao avo lenta
Fanaraha-maso sy ny metaly
Haingam-pandeha rahona: Avelao ny mpampiasa iray hanisy, hanala, na hanavao ny fantsona mivantana mifototra amin'ny mpanjifa sy ny filan'ny orinasa mivoatra. Izy io koa dia mampiditra codecs vaovao, manatsara ny loharanon-kevitra isaky ny fantsona, ary manome alalana ny mpampiasa iray manararaotra ny codecs sy fanapahan-kevitra marobe.
Famoronana vita: Mamela ny loharanom-bola ho voazara ho azy ireo manerana ireo zotra maro ahazoana fitaovana sy fahazoana failover feno.
Kalitao avo lenta: Mampiakatra ny kalitaon'izy ireo ny mpampiasa AWS Elemental MediaLive miaraka amin'i Statmux raha toa ka mitady tsara zanabolana na fantsom-pifandraisana tariby. Ireo mpampiasa dia afaka manome am-peo ny làlana amin'ny kalitao isaky ny fantsona tsy misy fanelingelenana mba hanomezana antoka fa ny fantsona avo indrindra indrindra no mitazona ny kalitao avo indrindra.
Operational efficiency: Manampy amin'ny fananganana entana mavesatra amin'ny fampielezam-peo mandritra ny minitra vitsy. Io asa io dia vita tsy misy fitaovana an-tserasera, ary mamela ny fantsom-pamitana amin'ny fomba mahomby kokoa noho ny bandwidth tambajotra.
Fanaraha-maso sy metetrika: Ny fanaraha-maso an'ny Amazon CloudWatch mitambatra dia ahafahan'ny fijerena tontolon'ny sary sy ny fampisehoana an-tsary maro.
Lohateny mitambatra: Ny fananana rafitra iray izay afaka mitantana ny fanodinana rehetra dia afaka manatsara tanteraka ny fandidiana. Eo no misy ny sary lohateny mirindra, ary izany dia noho ny Statmux ho an'ny AWS Elemental MediaLive, afaka manampy ireo mpamatsy atiny amin'ny fizarana horonantsary fandefasana nentim-paharazana ary koa horonantsary marolafy multiscreen amin'ny alàlan'ny maritrano tokana.
Serivisy Media an'ny AWS dia manome serivisy rahona izay ahafahan'ny fikambanana isan-karazany, ao anatin'izany ny fampahalalam-baovao sy ny fialamboly, orinasa, ary ny masoivoho governemanta mba hamorona andian-tsarimihetsika amin'ny haino aman-jery azo itokisana. Ny AWS Media Services dia napetraka ho singa isan-tsoka / fananganana trano ho an'ny fantsom-pidirana farany ka hatramin'ny farany, izay manampy amin'ny mpamatsy horonantsary mampiakatra ny fanavaozana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny tsena, raha toa ka mampitombo ny fidiran'ny mpihaino / firotsahana an-tsehatra, ary mampihena ny vidin'ny fananana rehetra. Ny vidin'ny pay-as-you-go dia mamela ny mpampiasa iray hanitatra ny famoahana horonan-tsary sy ny fitahirizana ny fotoana, ny hafainganam-pandehan'ny vola, ary ny fitantanana mora amina haino aman-jery tsy misy famatsiam-bola.
Ny vahaolana avy AWS Elemental avelao ny fahitalavitra fahitalavitra mahazatra sy horonantsary multiscreen izay namboarina sy nohamafisina tamin'ny sehatra manerantany. Izany dia manome ny mpampiasa ny fahafaha-manao mizaka ny toekarena sy manara-maso ny fampandehanana horonantsary ary ny fahalalahana mifantoka amin'izay zava-dehibe kokoa amin'ny fahaiza-manao simba kokoa, noho izany dia manova ny hevitra tokana ho lasa votoatiny izay afaka manintona ireo mpijery.
Ireo teknolojia elatra AWS manampy amin'ny famoronana horonan-tsary mihetsika, azo haingam-pandeha sy azo antoka ho an'ny frankaisan'ny haino aman-jery maneran-tany, mpandraharaha amin'ny fahitalavitra, fandaharana amin'ny votoaty, mpampita vaovao, masoivohom-panjakana ary orinasa miankina amin'ny mpanjifa. Jereo hoe ahoana ny AWS Elemental no manamboatra ny traikefa amin'ny haino aman-jery sy mifandraisa amin'izao.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba itahirizan'ny mpanjifa fotoana, hampihenana ny ambony, fampisondrotana ny harena ambany vidy, ary hitazomana ny kalitao sary tsara indrindra miaraka amin'ny AWS Elemental MediaLive sy Statmux, avy eo alao mijery. aws.amazon.com/medialive/features/statmux.
Broadcast Beat Magazine dia mpiara-miasa amin'ny NAB Show Media ofisialy ary miresaka momba ny haino aman-jery Engineering Broadcast, Radio & TV izahay ho an'ny indostrian'ny Animation, Broadcasting, Motion Picture ary Post Production. Mandrakotra ny hetsika sy fivoriambe ataon'ny indostria toa ny BroadcastAsia, CCW, IBC, SIGGRAPH, Digital Asset Symposium sy ny maro hafa izahay!
Mpanoratra amin'ny loham-pianakaviana - Novambra 21, 2020
Mpanamboatra / Editor amin'ny haino aman-jery sosialy - Marketing - Novambra 21, 2020
Gaffer - Novambra 21, 2020
Amazon Web Services AWS Cloud AWS Elemental AWS Elemental MediaLive fampitana injeniera fampitana Engineering Fahazotoan'ny rahona Cobalt Encoder Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Statmux Storage Ultra HD Forum Video injeniera 2019-12-01
Previous: Injeniera miantoka kalitao - fandefasana horonantsary HLS
Next: Ivontoerana Operations Center (NOC)
Dorna dia nampientanentana ny mpijery MotoGP nijery ny sary Viz Arena virtoaly sy nampitombo ny zava-misy
Mihaona amin'ireo mpandresy amin'ny The Rise Awards 2020
Ny fitahirizana nomerika dia ahafahana mamokatra aorian'ny famotehana
CustomWeather sy Bannister Lake dia niombon'antoka fiaraha-miasa hamoronana fahafaha-manao asa vaovao amin'ny alàlan'ny haino aman-jery nomerika
Vizrt dia manatsara ny fahafaha-miasa amin'ny fanovana ny Viz Story 2 sy Viz One 7 ary Adobe Premiere Pro
Bannister Lake mamita ny Tetikasa fampidirana Chameleon sy ny fampandrosoana manokana amin'ny RFD-TV
Mpanoratra amin'ny loham-pianakaviana
Mpanamboatra / Editor amin'ny haino aman-jery sosialy - Marketing
Mpandrindra ny media sosialy
Mpanolotsaina Mpanampy Horonantsary an-tserasera
Talen'ny Photography / Shooter